E nwere ọtụtụ azum na agwa ịhọrọ site na mgbe ị na-eche maka otu ị ga-esi mee email na ire ahia. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa email na-egosipụta usoro dị iche iche dị ka atụmatụ, oge, ule, na njikarịcha njiri mara nke ọma, mana ụzọ dị a delaa na-eweta nsonaazụ kacha mma? Kedu nke ị kwesịrị ilekwasị anya karịa nke ọzọ?
Site na ndị na-eme ihe ngosi na-etinye oge ka ukwuu na mmepe okike (23%) na ndị na-eme ihe nkiri kacha elu na-arara oge ha niile na atụmatụ (22%), o doro anya na nnyefe nwere ike ịdị mkpa dị ka - ma ọ bụrụ na ọ bụghị karịa - ọdịnaya ị ' na-enye.
Tụlee, dịka ọmụmaatụ, na 72% nke ndị ahịa niile na-anwale ahịrị isiokwu nke ozi ịntanetị ha tupu ha ezipụ na ndepụta nkesa ha, ebe naanị 15% na-anwale ozi ịntanetị 'mobile layout na ngosipụta ihe oyiyi. N'ihi eziokwu ahụ bụ na 75% nke smartphone nwe "ukwuu yiri" ka ihichapụ ozi ịntanetị ha na-enweghị ike na-agụ mfe na ha igwe, ịghara ịtụle abamuru nke optimizing maka mobile pụrụ ịkpata nnukwu weere n'ime onye mkpọsa, ọ bụghị banyere gafee atụmatụ zuru ezu.
Nke a bụ otu n'ime ọtụtụ akụkụ iji tụlee mgbe ị na-achọ imeziwanye arụmọrụ ahịa email gị. Luckily, Marketo jikọtara kemfe “email cheatsheet”N'ihi na anyị na-ezo na-atụ anya ka mma na ezi-n'iji ya gee ntị anyị email atụmatụ:
Tags: email MarketingInfographics Ahịa
VevoCart: ASP.NET Ecommerce Platform zuru ezu